မလေးရှား အစိုးရ၏ အဆင့် (၆) ဆင့် စီမံကိန်းတွင် ဒုက္ခသည်များ ပါဝင်ရန် မလို | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ကြစို့
တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကို အလိုရှိနေကြတဲ့ မလေးပြည်သူလူထု →
မလေးရှား အစိုးရ၏ အဆင့် (၆) ဆင့် စီမံကိန်းတွင် ဒုက္ခသည်များ ပါဝင်ရန် မလို
ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ မဟာမိတ်အဖွဲ့ – ပြန်ကြားရေးဌာန
ဇူလု (၀၇)၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) ကနေ မလေးရှား အစိုးရရဲ့ အဆင့် (၆) ဆင့် စီမံကိန်းမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်သွားမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် (UNHCR) ကဒ် ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ အနေနဲ့ (UNHCR) နဲ့ ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့ တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ အေဂျင့်တွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေကို အလုပ်လုပ်ခွင့် တရားဝင် ရရှိရေးနဲ့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနေ ထိုင်နိုင်ဖို့ စတာတွေ အတွက် ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုတဲ့အပြင် အဆင့် (၆) ဆင့် စီမံကိန်းထဲမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် မလိုဘူးလို့ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) က ဒီကနေ့မှာ ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေကြတဲ့ တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေ အပေါ် အစိုးရရဲ့ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တရားဝင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် စီစဉ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်းနှင့် နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း စသည့်အဆင့် ၆ ဆင့်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေရာမှာ ဒုက္ခသည်တွေလည်း အကျူံးဝင်တယ်လို့ ဝန်ကြီးချူပ် နာဂျစ်က တရားဝင် ပြောဆိုထားပါတယ်။
အခုလိုမျိုး တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ရရှိဖို့အတွက် မလေးရှား ရင်းဂစ် ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ (မြန်မာငွေ ကျပ် ၇ သိန်းခွဲမှ ၁၃ သိန်း) ကြား ကုန်ကျမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မဟာနန်း လုပ်ငန်းစုက ပြောပါတယ်။
ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးကနေ အခုလို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် မလေးရှားမှာ တရားမ၀င်ရောက်ရှိနေကြတဲ့ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ မြန်မာတွေဟာ အများစုက ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် မလေးရှား အစိုးရရဲ့ အဆင့် (၆) ဆင့်ပါ စီမံကိန်းဟာ သိပ်ပြီးတော့ ထိရောက်ဖွယ် မရှိဘူးလို့ အေဂျင့်တွေက ပြောပါတယ်။
အစောပိုင်း ကာလတွေက မလေးရှားနိုင်ငံမှာ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ် မရှိရင် အလုပ်ရှင်တွေက လက်မခံတော့ဘူး ဆိုပြီးတော့ သတင်းထွက်ပေါ်နေတာတွေ ရှိခဲ့ပါသေးပေမယ့် (UNHCR) က ခုလို ထုတ်ပြန် လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု မရှိတော့ဘူးလို့ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
Posted on July 7, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ, သိရှိစေရန်. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.